10.08.2012 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Fikradaha Guriga, Shumacyada shumaca iyo laambadaha
Shumaca shumaca waxay abuurtaa jawi kalgacal iyo kalgacal leh. Markii aad go’aansaneyso inaad abuurto niyadda jacaylka ama si fudud ugu shid laambad khafiif ah iyo iftiin yar, waa inaad xaqiiqdi lahaataa laambado iyo laambado si qurux badan loo qurxiyey. Waa kuwan qaar ka mid ah shumacyada asalka ah ee qurxinta shamaca. Laydhka macaamiisha iyo farshaxanimada leh dhalooyin jarjaray ama sanaadiiqda shaaha oo qurux badan. Jarsooyin lagu qurxiyo xargaha oo iftiinka qaababka yar ee xiisaha leh. Shumacyo ka sameysan biraha iyo rapansiga niyadda badda. Waxaad ka samayn kartaa shumacyo qurux badan koobabka birta ah iyo sanaadiiqda adiga oo si taxaddar leh u garaacaya oo ku garaacaya dhibco iyo hammooyin oo aad si tartiib tartiib ah u qaabaynta qaabab kala duwan.
Sidee loo sameeyaa laambadaha dhalada?
Fikrad kale ayaa ah in la sameeyo nalal waaweyn oo dhalooyin laga saaro. Soojiidasho! Fadlan ha u isticmaalin biyaha duugga ah iyo qaababka cadaadiska. Waa khatar, naftaada si xun ayaad wax u yeeli kartaa. Qeybta hoose ku goo mindi galaas, ama haddii aadan lug ku laheyn aqoon-isweydaarsiga galaaska ee kuugu dhow. Waxay u jajabin doonaan si sax ah oo sax ah, nadiif ah oo wareega wareega u gooya. Haddii aad wali naftaada maamuleyso, halkan waxaa ku yaal hab gebi ahaanba waxtar u leh guriga. Ha u isticmaalin carruurta!
Waad soo qaadaneysaa dhalada aad doorato oo waxaad ku duubtaa dhegaha (digaag, xarig) agagaarka 5-6 jeer. Waxaad ku oroddaa yarayd dhalada dusheeda waxaadna ku dhex gelisaa acetone. Yaan dib ugu celi qaybta ugu hooseysa ee dhalada oo shid. Acetone-ka waa inuu gabi ahaanba gubtaa. Ka dib isla markiiba naftaada ku dhex tuub biyo qabow hoosta ayaa laga saaraa oo keliya dadaal la'aan. Waa tan sida loo sameeyo:
Fikradaha qaar loogu talagalay dadka shumaca quruxsan iyo laambadaha:
qurxinta farshaxanka, qurxinta, qurxinta fikradaha, fikradaha guriga, fikradaha laambadlaha, fikradaha laambadaha, shumacyo shumacyo, shumacyo ka sameysan muus, shumac shumac shumac, laambadaha, nalalka beerta, laambadaha dhalada, laambadaha dhalada, Laydhka sanduuqyada, muraayadaha indhaha ka soo baxa, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Jikada dibedda lagu kariyo iyo hilibka dubitaanka
Jikada banaanka guud ahaan waa xal wax ku ool ah iyo maalgashi wanaagsan. Markii aan abaabulno leekka ...
Qurxinta Kirismaska ​​oo leh qalab dabiici ah
Waxaan kuu soo bandhigaynaa fikradda qurxinta Kirismaska ​​oo aad u qurux badan oo udgoon oo laga sameeyay qalabka dabiiciga ah, co ...
Alaabta curyaamada iyo Qurxinta
Giraangiraha qaarka waxaa loo adeegsan karaa qiyaas aad u sareysa ee art art si ...
Qurxinta gidaarka farshaxanka
Fikradani waxay ku habboon tahay xaaladaha aadan doonayn sawirrada darbiga, laakiin doorbida inaad ...
Guryaha Attic oo leh soo jiidasho caadi ah iyo qaab gaar ah
Gurigan gaarka ah wuxuu ku yaalaa shanaad, dabaqa sare ee dhisme la dhisay dhammaadka 19 ...
Fasaxyada xiisaha badan ee sanadka ayaa soo socda. Maalmo gaar ah oo maalmaha wanaagsan ay ku guuleystaan ​​...
Fikradaha jiifka oo leh codkul buluug ah
Midabka guduudka ah ee dhammaan hooskiisa ayaa astaan ​​u ah jacaylka iyo danqashada. In kasta oo aysan caddeyn ...
Naqshadeynta Jikada ee casaanka iyo madow
Fikradaha naqshadeynta jikada ee casaanka iyo madow waxay dad badani u jecel yihiin midab jecel ...